တိုကျို၌ ဖမ်းမိသည့် မြောက်ကိုရီးယား သတ္တုပိုက်များ မြန်မာနှင့် မဆိုင်ဟု သမ္မတရုံး ပြော | ဧရာဝတီ
တိုကျို၌ ဖမ်းမိသည့် မြောက်ကိုရီးယား သတ္တုပိုက်များ မြန်မာနှင့် မဆိုင်ဟု သမ္မတရုံး ပြော
ရန်ပိုင်| November 26, 2012 | Hits:1
| | ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုဆိပ်ကမ်း၌ ဖမ်းဆီးရမိသည့် ယူရေနီယမ်သန့်စင်ခြင်းနှင့် ဒုံးကျည်ထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုနိုင်သည့် အဆင်မြင့် သတ္တုပိုက်များသည် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် မည်သို့မျှ မသက်ဆိုင်ကြောင်း သမ္မတရုံး ညွန်ကြားရေးမှူး ဦးဇော်ဌေးက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
အဆင်မြင့် သတ္တုပိုက်များ ဖမ်းဆီးရမိသည့် သင်္ဘောကို တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ – အဆာဟိ ရှင်ဘွန်း)
ပြီးခဲ့သည့် သြဂုတ်လက တိုကျိုဆိပ်ကမ်း၌ ထိုင်ဝမ်မှတ်ပုံတင် ကုန်တင်သင်္ဘောတစီးပေါ်မှ DPRK (ကိုရီးယား ဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတနိုင်ငံ) တံဆိပ်ပါရှိသည့် အဆင့်မြင့် သတ္တုပိုက် ၆၅ ချောင်းကို ဖမ်းဆီးရမိခြင်းဖြစ် ပြီး၊ ၎င်းသင်္ဘောသည် မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံမှ ထွက်ခွာလာသည်ဟု အာဏာပိုင်များက ယူဆနေကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံမှတဆင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပို့ရန်ဖြစ်ကြောင်း နိုဝင်ဘာ ၂၄ ရက်နေ့ထုတ် ဂျပန်နိုင်ငံထုတ် အဆာဟိ ရှင်ဘွန်းသတင်းစာက ပြီးခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းက စုံစမ်းဖော်ထုတ် တင်ပြထားသည်။
သမ္မတရုံး ညွန်ကြားရေးမှူး ဦးဇော်ဌေးက “လွန်ခဲ့တဲ့ သြဂုတ်အတွင်းက မိတယ်၊ တရုတ်လည်း ပါဝင်ပတ်သက်တယ်လို့ ပါတယ်။ တကယ်သာ မြန်မာပြည်ကို ပို့ဖို့မှန်ရင် ဂျပန်အစိုးရ အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေက တရားဝင် ပြောကြားကန့်ကွက်မှာပါ” ဟု ဆိုသည်။
အဆိုပါဖြစ်ရပ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်း ရှိ မရှိ မြန်မာအစိုးရနှင့် နိုင်ငံတကာအစိုးရများ ဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်နေခြင်းကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် သိနိုင်ကြောင်း၊ ဂျပန်အစိုးရထံမှလည်း တရားဝင်ပြောဆိုမှု မရှိသည့်အပြင် မြန်မာအစိုးရ ပါဝင်ပတ်သက်နေသည် ဆိုပါက အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမား အပါအ၀င် ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များ လာရောက်လည်ပတ်မည် မဟုတ်ကြောင်း ဦးဇော်ဌေးက ဆက်ပြောသည်။
စစ်အစိုးရလက်ထက်က မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံနှင့် နျူကလီးယား စီမံကိန်းများ အပါအ၀င် ဒုံးကျည် ထုတ်လုပ်မှုများ ပြုလုပ်နေကြောင်း၊ မြောက်ကိုရီးယား ကျွမ်းကျင်သူများ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိနေသည်ဆိုသော သတင်းများကြောင့် အမေရိကန် အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀န်းက သံသယဖြင့် စောင့်ကြည့်ခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်။
“မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ စစ်အစိုးရ လက်ထက်ကသာ စစ်ရေးဆက်ဆံမှု ရှိခဲ့တာပါ။ အခု သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် လက်ထက်မှာ လုံးဝမရှိပါဘူး” ဟု ဦးဇော်ဌေးက ရှင်းပြသည်။
စစ်အစိုးရလက်ထက်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း သူရဦးရွှေမန်းကိုယ်တိုင် မြောက်ကိုရီးယားသို့ သွားရောက်ကာ စစ်ရေးဆက်ဆံမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ဖူးရာ အမေရိကန်နိုင်ငံက မြန်မာနှင့် မြောက်ကိုးရီးယားတို့၏ စစ်ရေးဆက်ဆံမှုများကို ဖြတ်တောက်ပစ်ရန် မြန်မာအစိုးရကို အကြိမ်ကြိမ် တောင်းဆိုခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရုရှားနိုင်ငံ အကူအညီဖြင့် နျူကလီးယားသုတေသန ဓာတ်ပေါင်းဖို တည်ဆောက်ရန် စစ်အစိုးရက ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း လုံလောက်သည့် ငွေကြေးနှင့် နည်းပညာ မတတ်နိုင်ခြင်း၊ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်း၏ အထင်အမြင် လွဲမှားခြင်းများကြောင့် အစိုးရသစ်လက်ထက်တွင် ရပ်ဆိုင်းလိုက်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံတကာ အဏုမြူစွမ်းအင် အေဂျင်စီ (IAEA) ၏ စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာပြီး သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးရန်လည်း သဘောတူညီပြီးဖြစ်ကြောင်း နိုဝင်ဘာ ၁၈ ရက်နေ့ အစိုးရ သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့က ဆိုသည်။
ဂျပန် ၀န်ကြီးချုပ် မေလကုန် မြန်မာပြည် လာမည်ဂျပန် ၀န်ကြီးချုပ်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးတိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်း အွန်လိုင်းမဲ မြန်မာတွေ အင်တိုက်အားတိုက် မဲပေးဓာတုလက်နက် ဖျက်သိမ်းရေးတွင် လက်မှတ်ထိုးရန် ဘန်ကီမွန်း တိုက်တွန်းကရင်ပြည်နယ် အတွက် Japan Platform အဖွဲ့ ဒေါ်လာ ၁၁ သန်း ထောက်ပံ့မည် နောက်ဆုံးရ ရုပ်/သံများ
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> burmathwe November 26, 2012 - 8:49 pm	ပာာ..ကိုယ်အိုးနဲ့ ကိုယ်ဆန်တန်အောင်မလုပ်ကြဘူး
Reply	burmathwe November 26, 2012 - 9:35 pm	သို့ / နိုင်ငံတော်သမတ ပြည်ထောင်စုသမတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊သို့အဝေးရောက်မြန်မာပြည်သားတစ်ယောက်မှ ဂုဏ်ပြု တမ်းချင်း………… ” နှလုံးအတု နဲ့ သမတအခု…အနားမှာလည်း အကြံပေးတွေ အတု…ဥပဒေ အတု နဲ့လွှတ်တော် အတု….ပြည်သူမျှော်တော့ အခု ပေးတော့ ဒီမိုကရေစီ အတု….ခေါင်းပေါင်းကြီတွေစု ဂုဏ်သရေရှိလူကြီး အတု….သူခိုးကြီးတွေစု လွှတ်တော် အတု မှာအတည်ပြု….ပြည်သူငွေတွေခိုးပြီးစု အနာဂတ်အတွက်ပိုင်စိုင်မှု့အတု…သေးချင်းတရားက ချိန်ခါယခု ပါသွားမှာကကုသိုလ် အတု….ပြီးပါပြီ…. (၂၃နှစ်တာကာလုံး မြန်မာပြည်ကြီး အား မနားမနေ ရွပ်ရွပ်ချွံချွံ…အလုံးစုံပျက်စီးအောင် ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ ကြသော နအဖ လူတစ်စု အတွက် ဂုဏ်ပြုပါသည်။ မိတ်တူကို…….သို့ /၁။ ယမမင်း။ ၂။အ၀ီစိမင်း။၃။ငရဲကြီးရှစ်ထပ်မင်း
Reply	ေိုးသိ November 27, 2012 - 4:19 am	မသိသေးရင်လည်း ပြောရတာပါ့ ဦးဇော်ဌေး ..
နျူကလီးယားအကြောင်းဘာမှ နားမလည်တဲ့စစ်ဗိုလ်တွေကို မြောက်ကိုးရီးယားကနားလှည့်ပါးရိုက်နေတာ။ ဗမာပြည်အနှံ့ တူးပြီး ဖွက်ထားတဲံ့ဒုံးကျည်တွေကို မြောက်ကိုးရီးယားကနေခလုတ်တချက်နှိပ်ရုံနဲ့ သူတို့နဲ့မတည့်တဲ့နိုင်ငံကို သွားချရော။ ထောက်လှမ်းရေးဂြိုဟ်တုတွေက တွေ့ရတဲ့ ဒုံးကျည်တက်လာတဲ့နေရာကို ပြန်ချရော။ ဟော ခံရတာက ဗမာ။ မြောက်ကိုးရီးယာကတော့ အနေသာချည်း။ အာဇာနည်ဗိမာန်ကိုဗုံးခွဲခဲ့တာ မမှတ်သေးဘူးလား။
Reply	ywarthar November 27, 2012 - 1:23 pm	အင်း….ခုတလောတွေ.နေဖတ်နေရတဲ့သတင်းတွေ…တုန်.ပြန်ချက်တွေ..
Reply	M Kar Lu November 30, 2012 - 11:15 am	ဦးသိန်းစိန် အစိုးရလက်ထက်မှာ မြောက်ကိုးရီးယားနဲ့ အဆက်အသွယ် မရှိဘူးဆိုတာ မှန်ပါတယ်။ ဗိုလ်သိန်းစိန်တုန်းက ရှိပြီးနေတာပါ။ ပြုံယမ်းစားသောက်ဆိုင်ဗန်းပြထားတဲ့ ထောက်လှမ်းရေးစခန်းတောင် ရန်ကုန်မှာ ရှိနေပြီ လေ။ ဗုံးခွဲရ ပိုလွယ်သွားပြီ။ ဟိ ..ဟိ ..
Reply	တခြားဖတ်စရာများ မြွေတောင် ဖားတောင်စီမံကိန်း ယာယီဆိုင်းငံ့ရန် ချင်းဒေသခံများ တောင်းဆို